SOMALILAND: Madaxweyne Muuse Biixi Iyo Mucaaradka Oo Khilaaf Cusub Ka Dhex Qarxay - Jigjiga Online
HomeSomalidaSOMALILAND: Madaxweyne Muuse Biixi Iyo Mucaaradka Oo Khilaaf Cusub Ka Dhex Qarxay
Hargeysa (JigjigaOnline) – Waxaa sii xoogeysanaya ismari waa siyaasadeed oo salka ku haya guddiga doorashada kaasoo u dhaxeeya xisbiga talada haya ee Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyo xisbiga Mucaaradka, labada dhinac ayaana BBC-da u sharraxay mowqifyadooda.
Xisbiga Mucaaradka ee Waddani ayaa sheegay inuu ka baxay heshiiskii laga gaaray khilaafkii doorashada iyo kordhinta tirada guddiga doorashooyinka Somaliland, ka dib markii, sida ay mas’uuliyiinta xisbaagi sheegeen, uu Kulmiye “si bareer ah u xagal daaciyay meel marinta heshiiskaasi,” oo ay ahayd inay ka doodaan golaha wakiillada, taasina aanay dhicin.
Hase yeeshee, siyaasiyiinta hoggaamiya xisbiga talada haya ayaa beeniyay eedeynta loo jeediyay, iyagoo sheegay in arrintaas ay leedahay waji ka duwan midka ay mucaaradku u yeelayaan.
Muxuu qoonsaday xisbiga Mucaaradka?
Hoggaamiyaha xisbiga Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa BBC-da u sharraxay go’aanka ay qaateen.
“Maadaama ay xisbiga Kulmiye iyo xukuumaddiisu jabiyeen heshiiskii ay saddexda xisbi wada galeen ee lagu horgeynayay golaha baarlamaanka in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashada, kuwaas oo toddobo ahaa, si looga dhigo sagaal, annaguna sidaas awgeed mar haddiiba ay iyagu burburiyeen dhankeennana waan ka baxnay hehsiiskaas”.
Wuxuu sheegay in xisbiga talada haya ay ka gaabiyeen wada shaqeynta la xiriirtay in golaha wakiillada laga ansixiyo heshiiskaas.
“Kulmiye waxaannu ka weynay gacantii wadashaqeyneed ee uu heshiisku qorayay, guddoomiyaheenna Cabdiraxmaan Cirro ayaa madaxweyne ku xigeenka ugu tagay guriga, wuxuuna weydiiyay arrintaas, illaa iyo haddana ma aannaan ka helin wadashaqeyn”.
Xubnaha xisbiga Kulmiye ee ku jira baarlamaanka ayaa lagu dhaliilay inay hor istaageen mooshinkii ay xisbiyada soo saxiixeen, inkastoo ay eedeyntaas ku tilmaameen mid aan “sal iyo raad toona lahayn”.
Maxay eedeyntan ka dhaheen xisbiga talada haya?
Xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cige, oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha gudaha iyo nabad galyada ee Golaha Wakiillada, kana tirsan xisbiga xukunka haya ee Kulmiye ayaa wareysi uu BBC-da siiyay ku beeniyay eedeynta uga timid dhinaca Mucaaradka.
“Waxaa la yiri ‘si xun u sheeg sixir ka daran’, illaa maanta ma jiro wax ay saddexda xisbi ku heshiiyeen oo golaha la keenay, mooshinka golaha la keenay wuxuu ahaa mid uu wato xisbiga waddani, xildhibaannada Waddani xaq bay u leeyihiin inay mooshin keenaan, ka dib wuxuu maray sifihii sharciga ahaa”.
Dhanka kale wuxuu sheegay inaan iyaga xisbi ahaan fursad loo siinin wadashaqeynta ku saabsan diyaarinta Mooshinka.
“Annagu wax aan saxiixnaba maynaan arkin, kaliya waxaan aragnay mooshin uu kulmiye wato oo golaha dhex ordaya, sidaas darteed maba jirin wax ay xisbayadu isla dhiseen oo la keenay golaha”.
Mas’uuliyiinta xisbiga mucaaradka ayaa sheegay inay wali diyaar u yihiin xal, ayna ka war sugayaan go’aanka madaxweynaha, ahna hoggaamiyaha xisbiga Kulmiye, Muuse Biixi Cabdi.
Dacwadda Al Bashiir: Madaxweynihii hore ee Suudaan “oo malaayin doolar ka helay Sucuudiga”